Nhasi, Leopoldo María Panero angave ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe ekuberekwa | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi, Leopoldo María Panero angave ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe ekuberekwa
Aive weboka re itsva; akafa nemakore makumi matanhatu nemashanu muLas Palmas de Gran Canaria; yaive mudetembi wepano; mhuri yake (babamunini, baba, muzukuru, nezvimwewo) yaive uye iri pedyo kwazvo nenyika yetsamba zvakajairika; yakashandawo se muturikiri, munyori uye munyori; yaigamuchirwa nguva nenguva mu Psychiatric Center uye muna 2003 akapihwa iyo Tin Mubairo Wemabhuku.
Isu tinotenda kuti ivo vanopfuura zvakaringana zviyeuchidzo zvekuziva kuti tiri kutaura nezve mudetembi Leopoldo María Panero, anozosvika makore makumi mapfumbamwe nemasere nhasi. Nhasi, mumutero wake isu tinoda kudzoreredza mamwe emitsara yake uye nhetembo. Sezvo ini ndichigara ndichida kutaura kuti: izvo zvakanyorwa hazvife ... Izwi rinogara riripo.
Nhetembo mbiri naLeopoldo María Panero
Chii chinonzi mashiripiti, iwe unobvunza
muimba ine rima.
Chii chisina, unobvunza,
Uye chii murume ari kubuda nepasipo
uye achidzokera oga kuimba.
Jongwe rinotenderera mumunda wakanyorova
yekamuri yangu uye inotenderera pakati pemabhodhoro asina chinhu.
Ndinotarisa pameso akeuye ndinoona maziso enyu maviri
Uye imba, iwe unoimba usiku sekupenga,
nekutuka kwenyu kuti ndirege kukotsira, kuti ndirege kukanganwa
muka muka nokusingaperi pamberi pemeso ako maviri,
5 Mitsara naLeopoldo María Panero
Dai nhetembo dzake dzaive dzakanaka, mitongo yake yaipa mutongo nekunyaradza vanodada ...
"Ino inyika yevanhu vangadikitira vanofarira bhora nenzombe nekuda kwekudzvanyirirwa pabonde."
"Ini handitende kuchikara chekufemerwa, ndinorima hunyanzvi sesainzi."
"Ndichava chikara asi handipengi."
"Ivo vanyori veSpanish vakapatsanurwa kuita mbiri: vanokoshesa bourgeois nemapenzi anosemesa."
"Freud akazvitenda kuti ndiye anopesana naKristu, asi aitaura zvakawanda."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nhasi, Leopoldo María Panero angave ane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe ekuberekwa
Vanyori vakazvarwa muna Chikumi. Mamwe mitsara kubva kumabasa ake.
Mabhuku matatu kudanana